Iqhekeza elincinci leparadesi ...
Kwi-50 m kuphela ukusuka elwandle, le ndlu "yesiphelo sehlabathi" iya kukuvumela ukuba ukonwabele ukusetwa kwendalo okwenyani. Idizayinwe kakuhle, ifakwe kwaye ixhotyiswe, indlu ipholile kwaye ikhululekile. Yeyona ndawo ifanelekileyo yeholide eyonwabisayo
Yakhelwe kwithambeka lenduli, kwaye ijonge elwandle, le ndlu ikunika imvakalelo yokuba "sesiphelweni sehlabathi" kunye nepanorama emnandi yeMeditera, ngelixa ihlaliswa kakuhle. Indlu izimele ngokupheleleyo, inegadi yayo kunye nesango. Ibandakanya amagumbi amabini okulala (i-EU kabini), indawo enkulu eqhelekileyo ebandakanya igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, indawo yomlilo kunye nekhitshi evulekileyo, igumbi lokuhlambela, kunye ne-terrace / veranda. Izixhobo, izixhobo kunye nezixhobo ziyafumaneka, kwaye ilinen inikezelwa.
Indawo ifanelekile kwabo bathanda ukuqubha okanye ukuntywila emanzini kulwandle olucocekileyo lwekristale. Ikulungele ngokufanayo ukonwabela ibarbecue egadini okanye ukulala kwihammock... xa amaqondo obushushu ethandeka kwizinto zomzimba, uhambo oluhle elunxwemeni, okanye uhambo lweeyure ezininzi kwingingqi, kunye neendawo ezimangalisayo. ixatyiswe...kwaye igqitywe ebusika ngengokuhlwa epholileyo ngaseziko!
Ifumaneka kunxweme olusemantla eTunisia, phakathi kweBizerte kunye neTunis, iSounine yiyure nje yokuhamba ukusuka eTunis kunye namadlelo ayo asemantla (iSidi Bou Said, Carthage), ngelixa ibonelela ngotshintsho lokwenyani lwendawo. Akukhuthazwa kubalandeli beeklabhu zasebusuku, njengoko indawo yahlala ingabonakali ngenxa yokhenketho oluninzi. Ngaphandle kwengoma, fumana ubuso bokwenyani baseTunisia. Sibekwe kunxweme olunamatye nolusendle, phakathi kolwandle oluhle lwase-Ain Mestir (500m) kunye nolunye ulwandle oluncinci kwicala le-Sounine. Kumacala omabini, iikhefi ezahlukeneyo zihlala ehlotyeni kumanxweme (ezinye zazo zikwalungiselela iintlanzi ezintsha ezihamba nesaladi). Indawo yokutyela ikwavulwa kakhulu enyakeni, ibonelela ngeentlanzi ezintsha, ukutya kwaseTunisia kunye nepizza.
I-Sounine yidolophana encinane nenoxolo enabemi abamalunga nama-2000. Umbindi welali umalunga nemizuzu engama-30. hamba usuka endlini. Ubukhulu becala kukho abantu abathengisa igrogrisi kunye nabathengisi bohlaza, kwaye usenokufumana izonka zesintu esitsha ezilungiswa ngabafazi belali yonke imihla kunye nobisi olutsha lwenkomo zasekuhlaleni.
Ukuthenga ngokufanelekileyo, kungcono ukuya eRas Jebal, idolophu encinci ekwiikhilomitha ezimbalwa. Ungafumana imarike entle, enika ukhetho olubanzi lweentlanzi, inyama, imifuno kunye neziqhamo. Kufutshane nevenkile enkulu, apho unokufumana phantse yonke enye into...
Siyakuvuyela ukufumana iindwendwe ezivela ehlabathini lonke, yaye sinikela ingqalelo ngenyameko kwizicelo neminqweno yazo. Siyavuya ngokufanayo ukwabelana ngothando lwethu kweli lizwe lihle, iTunisia. Ukuba uceba ukutyelela okanye uhambo oluya kwezinye iindawo zelizwe, sazise, singakuvuyela ukunika iingcebiso kunye neengcebiso.
Siyakuvuyela ukufumana iindwendwe ezivela ehlabathini lonke, yaye sinikela ingqalelo ngenyameko kwizicelo neminqweno yazo. Siyavuya ngokufanayo ukwabelana ngothando lwethu kweli li…